कुन विमानस्थलको कमाइ कति ? ११ विमानस्थलको अाम्दानी करोड माथि | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कुन विमानस्थलको कमाइ कति ? ११ विमानस्थलको अाम्दानी करोड माथि
कुन विमानस्थलको कमाइ कति ? ११ विमानस्थलको अाम्दानी करोड माथि
माघ १४ गते, २०७४ - १६:२३
उनले भने “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले मात्रै अरु विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । त्यसले आर्थिक रुपमा समेत असन्तुलन कायम गरेको छ ।”
उनले भने “कतिपय विमानस्थल सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले मात्रै चलिरहेका छन् । नाफाभन्दा पनि सेवामूलक ढंगले मात्रै चलिरहेका छन् ।” सरकारले जनतालाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएका विमानस्थलको दायित्वसमेत प्राधिकरणको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ । हाल पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा छ । रासस
माघ १४ गते, २०७४ - १६:२३ मा प्रकाशित